स्वास्थ्यशैली Archives - Page2of 55 - Recent Nepal News
जाडोयाममा शरीरलाई चिसोसँगै विभिन्न संक्रमणबाट बचाउन खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो वेला खानामा प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी वा तरकारी समावेश गरेमा चिसोबाट बच्न सकिन्छ । अब जानौँ जाडोयाममा उपयोगी तरकारीबारे : मेथी मेथीको दाना तरकारीमा नियमित फुराउँदा स्वादिष्ट मात्रै बन्ने नभएर स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी हुन्छ । चिसो मौसममा विभिन्न संक्रमणबाट बच्न मेथीको साग अझै बढी स्वस्थकर हुन्छ । मेथीमा ...
काठमाडौँ । तपाईंले आफ्ना बच्चाको व्यवहारमा फरक पाउनुभएको छ ? छ भने सावधान हुनुहोस्, उनीहरूलाई बेग्लै खालको मानसिक समस्या पनि हुनसक्छ । त्यसलाई मनस्थिति परिवर्तन अर्थात् ‘मुड स्विङ’ भनिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो बच्चाको मानसिकतासँग जोडिएको समस्या हो । अभिभावकलाई आफ्नो बच्चाको यस्तो मनोवृत्तिबारे थाहा छ तर के भएको, उपचार के छ ? यसबारे भने थाहा नभएका कारण पनि कतिपय अभिभावक दिक्क मान्ने गर्छन् । पाट...
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई डेंगी
असोज १७, काठमाडौं- काठमाडौंका मेयर विधासुन्दर शाक्यलाई डेंगी भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डेंगी परीक्षण गर्दा डेंगी संक्रमण देखिएको हो । शाक्यलाई त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लू क्रस अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा डेंगीको संक्रमण फैलिएको छ भने डेंगीको कारण सात जनाले ज्यान समेत गुमाईसकेका छन् ।
कसरी पचाउने मासु ? मासु पचाउने तरिकाबारे नेपालीमा भ्रम
काठमाडौं – दसैँमा कतिपय नेपाली मासु टन्न खाने र पचाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । मासु खाएको वेला अन्य केही चिज खाँदा सजिलै पच्ने धारणा आमनेपालीमा व्याप्त छ । तर, अन्य कुनै खानाले मासु पचाउने क्षमता राख्न सक्दैन भन्छन् चिकित्सकहरू । मासु पचाउने व्यक्तिको पाचन क्षमताले नै हो । त्यसैले अन्य खानामा जोड गरेर मासु कम खानु नै राम्रो भन्छन् होमियो चिकित्सक डा. सविर खाँः धेरै मासु खाएको वेला पचाउन भन...
काठमाडौं, असोज ६ – तपाईँ खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । पछिल्लो समय मुख्यरूपमा मुसाको टोकाइ र सङ्क्रमणबाट मानवमा लाग्ने स्क्रब टाइफस नामक रोगको सङ्क्रमण अधिकांश जिल्लामा फैलिएको छ । कीटजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार अहिले...
धरानबाट सुरु भई हिमाल चढी मन्त्री,नेता,डाक्टरलाई समेत नछोडेको डेंगी रोगबाट कसरी बच्ने ?
एडिस एजेप्टाइ र ए.ई. अल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट भाइरसको संक्रमण भई सर्ने डेंगी रोग अहिले प्रकोपको रुपमा देखिएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार वर्षातको समयमा यो रोग बढी देखा पर्छ। सामान्यतया १५ देखि ३५ डिग्रीको तापक्रममा लामखुट्टेको वृद्धिविकास हुन्छ र डेंगीको भाइरस फैलाउने लामखुट्टेका लागि भने २२ देखि ३४ डिग्रीसम्मको तापक्रम निकै अनुकूल मानिन्छ। यो जातको लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्...
काठमाडौं - सामान्य तपाई हाम्रो गाउँघरमा पाइने तरकारी हो कर्कलो । यसको तरकारी कसैलाई मन पर्छ भने कसैलाई मन नपर्न सक्छ । यसको पात तथा फल दुवै तरकारीको रुपमा खान सकिने तरकारी हो कर्कलो । यसबाट प्रोटिन, पोटासियम, भिटामिन, आइरन लगाएतका तत्वहरु पाइने गर्दछ । हिन्दू नारीको ठूलो चाड तीजको तेस्रो दिन अर्थात् ऋषिपञ्चमीका दिन कर्कलोको तरकारी खाने प्रचलन छ । अघिल्लो दिन निराहार ब्रत बसेर पञ्चमीको दिन नदी ...
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिद्वारा धर्ना कार्यक्रम र डिन कार्यालयमा तालाबन्दी
काठमाडौं, भाद्र १५-स्वास्थ्य क्षेत्रमा रेहको विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न मागपत्र प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले माग अनुरुप कुनै सुनुवाई नभएकाले आज त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा धर्ना कार्यक्रम राख्नुको साथै डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले ७२ घन्टाको अल्टिमेटम सहित आफ्ना माग पूरा नभएमा त्यसबाट विषम् परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीसहितको ...
कसरी बच्ने छारे रोगबाट ?
काठमाडौं- छारे रोग कहिलेकाहीँ अपर्झट देखा पर्ने र रोकिने गरे पनि यो निकै खतरनाक रोग हो । यो रोग लागेका मानिस आफैंमा सधैं एकैखाले होस र सचेत अवस्थामा हुँदैनन् । यो रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशुमा पनि देखा पर्छ । यो एक किसिमको मानसिक रोग हो । यो रोगलाई स्थानीय जनताले विभिन्न नामले चिन्ने गर्छन् । कसैले यसलाई मृगी, चरिफाय, फफड्के र रिङ्ने पनि भन्छन् । प्रायः कमजोर हृदय र सोच भएका व्यक्तिमा यो रोग ...
काठमाडौं - तपाईंमा भाइरल हेपाटाइटिसको संक्रमण त छैन? एक सामान्य परीक्षणले आफनो शरीरमा यो भाइरसको उपस्थितिबारे यकिन हुन्छ। धेरै नेपाली आफूलाई भाइरल हेपाटाइटिस छ वा छैन भन्ने जानकार छैनन्। भाइरल हेपाटाइटिस नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियामा सन् २०३० सम्म मुख्य जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिने आंकलन गरिएको छ। यो जानकारी आजको कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले लेखेका छन्। यो समस्याबाट २ वर्षे शिशुदे...